တစ်နည်းနည်းနဲ့ Palpatine LEGO သို့ပြန်လာ၏ Star Wars မဂ္ဂဇင်း
တစ်နည်းနည်းနဲ့ Palpatine LEGO ၏နံပါတ် 69 ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည် Star Wars မဂ္ဂဇင်း
22 / 02 / 2021 22 / 02 / 2021 ခရစ် Wharfe 1065 Views စာ0မှတ်ချက် 75267 Mandalorian တိုက်ပွဲ Pack ကို, 75291 မရဏစတားနောက်ဆုံး Duel, patကရာဇ် Palpatine, မီဒီယာချက်ချင်း, Lego, Lego Star Wars, Lego Star Wars မဂ္ဂဇင်း, Star Wars, Star Warsဖြေ, Star Wars: Skywalker ၏မြင့်တက်မှု, အဆိုပါ Mandalorian, TIE ကြားဖြတ်
သေလွန်သူများပြောကြသည်! သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးသူတို့သည်ပြIssueနာ၏ ၆၉ တွင်ပြုလုပ်သည် Lego Star Wars အခမဲ့Emကရာဇ် Palpatine minifigure ပါလိမ့်မည်သည့်မဂ္ဂဇင်း။
ကံမကောင်းစွာပဲ, သူအသစ်ပေါ်လာ - နှင့်အများကြီး - တောင်းဆိုထားသည် - - ဟောင်း Sheev ၏သူသည်ပေါ်လာသည်အဖြစ်ထုတ်ဝေအသစ်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး Star WarsRise of Skywalker အားလုံးသည်အနီရောင်ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်သက်ဝင်ခြင်းများရှိသော်လည်း ၂၀၂၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအထိရောက်ရှိလာသည့်ဗားရှင်း 75291 မရဏစတားနောက်ဆုံး Duel.
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကပေါင် ၈၉.၉၉ သတ်မှတ်ထားတဲ့နောက်မှာအရင်တုန်းကကာရံထားတဲ့ minifigure တစ်ခုကိုရွေးနိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဆိုလိုတာကသင်ဟာအလားတူ ၂၀၁၅ ဗားရှင်းကိုပိုင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်ကောက်ယူဖို့စိတ်မ ၀ င်စားသေးဘူးဆိုတာပါ။ ရုံ£ 89.99 ။
ချက်ချင်းမီဒီယာ၏ထုတ်ပေး 69 Lego Star Wars မဂ္ဂဇင်းကိုမတ်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင်စင်ပေါ်များသို့ရောက်ရှိလိမ့်မည်။ လက်ရှိထုတ်ဝေမှုတွင်အခမဲ့မင်ဒိုရီယန်စစ်သည်တော်၏အသေးစားဓာတ်ပုံပါဝင်သည် 75267 Mandalorian တိုက်ပွဲ Pack ကိုပြီးခဲ့သည့်လကတစ် ဦး featured နေစဉ် build TIE ကြားဖြတ်.
ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်အသေးစားပုံစံနှစ်ခုကိုတတန်းထဲတန်းစီရပြီးဆိုလိုသည်မှာပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းတို့သည် mini-models နှင့်ပြိုကွဲသွားလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့စောင့်ဆိုင်းကြည့်ရှုရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်, သောအဘို့ထုံးတမ်းစဉ်လာသတ်မှတ်ခြင်းရှိမရှိ Lego Star Wars ရှေ့ဆက်သွားမဂ္ဂဇင်း။
သင်ယခုလ၏သတ္တုပါးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအခမဲ့ပြုလုပ်ထားသောအရာအားအနီးကပ်ကြည့်ရှုနိုင်သည် ဒီနေရာမှာကိုနှိပ်ခြင်းမတ်လ ၁၆ ရက်အထိသိုလှောင်ထားသည့်နောက်ဆုံးလက်ကျန်အရောင်းဆိုင်အားလုံးတွင်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည် - (သို့) ပြ68နာ ၆၈ ၏စာမျက်နှာများကိုကြည့်ပါ။ ဒီမှာ ဦး တည်.
← Lego ၏နံပါတ် ၆၈ ကိုကြည့်ပါ Star Wars မဂ္ဂဇင်း
LEGO ကိုအနီးကပ်ကြည့်ပါ Star Wars မဂ္ဂဇင်း၏အခမဲ့ Mandalorian အသေးစားဓာတ်ပုံ →